Sikuqaphele izindlela zokupheka okumnandi futhi ezinempilo.
2 amalitha omhluzi obomvu wenkomo noma umhluzi olula wenkomo namanzi
cishe i-2.2 kg yenkomo engenamathanjeni (noma ngamathambo okudla), isibonelo, imisipha ye-calcaneus, i-shank yangaphakathi, intamo, ingxenyeni yezimbambo zangaphambili, i-brisket, umcibisholo wezintambo - ngokuhlukana noma engxenyeni
Ukuze uthole ukunambitheka kangcono (okukhethwa kukho):
nanoma yimaphi amathambo enyama yenkomo kanye nezinsalela, okuluhlaza noma abilisiwe
1 izimbali zemifino
imifino enomnandi, eqoshiwe ngokweqile
3 izaqathe ezinkulu ezihlutshiwe
Ama-3 amakhulu ahlutshiwe
Isiqu esikhulu esikhulu se-leek
Iziqu ezintathu ezinkulu zesilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi namaqabunga
Izinhlobo zemifino (konke ndawonye noma okukhethwa kukho): izingcezu ezingu-2-3
wedges of iklabishi
Indlela yokulungisa isidlo:
Beka inani elilinganayo lamathambo kanye ne-scraps epanini elikhulu, isiqephu semifino nemifino, uthele umhluzi wenkomo bese ulethe ngamathumba. Okwamanje, ubophe ngokucophelela inyama nge-white white cotton bese uyifaka epanini, uma kunesidingo uthele amanzi phezu kwenyama ukuze ube namanzi angama-2-3 cm. Thathela emathumba, ususe isikhumba, ungafihli i-pan bese ubumba inyama ngokushisa okuncane kuze kube yilapho usithambile ( hlola ngemfoloko, futhi ngokunemba usike ucezu bese uzama). Uma ezinye izingcezu zikulungele ngaphambi kwabanye, zifake esitsheni esihlukile futhi uthele inani elincane lomhluzi. Ukupheka inyama kuthathwa epanini, futhi isitokisi sihlungiwe, futhi ususe amafutha, engeza ukunambitheka kuya kunambitha, bese uletha umhluzi epanini nenyama. I-stew ihlale ifudumele ihora ngaphambi kokukhonza; kungakwazi, futhi kufudumale, ukumboza ngokukhululekile i-pan nge-lid. Phakathi naleso sikhathi, faka ama-broth ambalwa ngenani elincane lomhluzi, futhi uma sekuyisikhathi sokukhonza, uthele umhluzi wabo kwelinye ipanini. Ngaphambi kokukhonza, sinciphise inyama ibe yizicucu, uyizungeza ngemifino bese uthele umhluzi omncane. Okusele komhluzi kuthululwa epanini bese ubeka itafula. Uma ufuna, ungakhonza i-gherkins yesiFulentshi, usawoti omkhulu kanye nesikhukhula se-horseradish salesi sidlo.
Bouquet kusuka amakhambi culinary
Ukuze uthole isixha esikhulu, thatha ama-sprigs angu-8 e-parsley, 1 iqabunga elikhulu lama-bay, i-twig ye-thyme, amaqabunga amane ama-clove noma i-clove pepper nama-clove ama-3 amakhulu aqoshiwe, i-garlic eluhlaza, gqoka e-gauze ehlanzekile bese ubopha ngentambo. Ngezinye izikhathi i-garlic ingashintshwa ngamaqabunga esilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi kanye / noma ngezingcezu ze-longitudinal zama-leeks.
Isobho nge amazambane kanye leek
Izinkomishi ezi-3 zama-leeks ahlutshiwe (ezimhlophe, ezinemihlwende eluhlaza okwesibhakabhaka)
Izinkomishi ezi-3 zamazambane ahlutshiwe futhi aqoshiwe
6 izinkomishi zamanzi
0.5 amathisipuni kasawoti
0.5 izinkomishi of ukhilimu omuncu
Indlela yokulungisa ama-leeks
Hlanganisa izimpande neziqongo, ushiye iziqu ezinamamitha angu-15-17 ubude. Bamba amaqabunga ngeminwe, uthinte uhlamvu ngalunye ube yizinhlangothi ezimbili, bese ube yizingxenye ezine. Hlanza ngaphansi kokusebenza kwamanzi abandayo abandayo ukuze ususe konke ukungcola. Amaqabunga angagcwaliswa ngokuphelele noma ahlukaniswe izicucu. Sika amahlumela abe yizicucu 5 cm ubude, cindezela amaqabunga bese uwasika ube yimichilo. Beka ama-leeks namazambane epanini elingu-litre ezintathu. Thela amanzi bese ulethe ngamathumba. Vala bese ubamba imizuzu engu-20-30 kuze kube yilapho imifino ilula. Engeza usawoti kanye nokuhlwaya ukunambitha. Khonza etafuleni lonke noma njengamazambane ahlambulukile. Beka ngamunye ukhonza i-spoonful of ukhilimu omuncu.
2 amaqanda amakhulu noma amathathu aphakathi
i-pinch enkulu kasawoti
1 ithisipuni yamanzi abandayo (uma isifiso), ukuze uhlanganise kangcono izikhupha namaprotheni
1 tbsp. isipuni sebhotela elingenalutho
Lungisa ipulazi elifudumele, kanye nebhotela, ama-sprigs ambalwa ka-parsley kanye ne-spatula yerabha. Basha amaqanda esitsheni, usawoti, pepper, uthele amanzi futhi ugxume ngamandla. Beka i-pan yama-omelettes ngokushisa okuqine kakhulu, faka amafutha bese ugoba ipani lokudoba ngezindlela ezihlukene, ukuze lisakaze phansi nasezindongeni. Lapho amafutha cishe eyeka ukuqhuma, kepha angabi mnyama, uthele ingxube yeqanda. Khushaza ngokushesha i-pan yokudoba ngokubamba ngesibambo ukuze ingxube isakaze phezulu. Bamba imizuzwana embalwa ukuze uvumele ingxube ibambe phansi. Bese uqala ukudonsa i-pan yokudoba, ukuphonsa iqhwa leqanda kuze kube sekugcineni. Phonsa ngokugqamile, kancane kancane uphakamise isibambo bese uguqula umkhawulo owedlule phezu kokushisa. I-omelet iqala ukukhasa ngokwayo. Lungisa ubuningi ngefosholo, uma kunoma yikuphi okuyingxenye ephuma ngaphandle kokudingekile. Bese ushaya isibindi ngokuqinile phansi kwesibambo, futhi i-omelet izogoba ekugcineni. Ukuze ubeke i-omelette, vula ngokushesha isibambo ngakwesokunene bese usiqonda ngesandla sakho sokunene-isundu kusukela ngezansi, isithupha phezulu. Ukubamba ipuleti ngakwesokunxele sakho, ugobe i-pan yokucwenga kanye ne-plate ngokuya komunye nomunye, uphonsa i-pan yokudoba phezu kweplate, futhi i-omelet izowela endaweni efanele. Uma kunesidingo, faka i-omelet ene-spatula. U-Nablite ucezu lwamafutha emfoloko, ngokushesha uzigcobe nge-top omelet, uhlobise nge-sprig ye-parsley bese ukhonza etafuleni.
4 tbsp. ibhotela lesipuni
1 inkomishi anyanisi oqoshiwe noma amahlombe amhlophe
Izindebe ezingu-0.25 zofulawa
1 inkomishi hot inkukhu umhluzi
6 izinkomishi zobisi
4 izinkomishi zamakhowe amasha, ahlutshiwe, ahlanjwe futhi adliwe
I-0.25 i-teyi yetiyi yamaqabunga omisiwe we-tarragon
0.5 izinkomishi (noma ngaphezulu) ukhilimu olunamafutha, ukhilimu omuncu noma ukhilimu fresh (ozikhethela)
usawoti kanye nepelepele emhlophe emhlabathini
amaconsi ambalwa omusi kalamula (ngokuzithandela)
i-sprig ye-tarragon nezinhlanzi ezishayekile zezigqoko zama-mushroom (ukuhlobisa)
Silungiselela isisekelo sesobho. Faka u-anyanisi noma amaqebelengwane epanini lokuthosa ngephansi eliphansi futhi gazinga kuze kube yilapho ubonakala ebhokisini ekushiseni okuphansi emaminithini angu-6-8. Engeza ufulawa futhi, ugqugquzela, gazinga elinye imizuzu 2-3. Susa ekushiseni, kancane kancane uthele emhluzeni oshisayo. Letha emathuneni omnene ngokushisa okulinganayo bese uthele ubisi. Beka isobho lamakhowe kanye ne-tarragon eyomile bese upheka ukushisa okuphansi eminye imizuzu engu-20, uvuselela njalo ukuze ungashisi. Ngesicelo, faka ukhilimu, upheke kancane uphinde uhlanganise usawoti kanye nezikhathi zokunambitha ukunambitha, futhi, uma kunesidingo, amaconsi ambalwa kalamula kalamula. Ukuhlobisa umkhonti ngamunye ngamunye ngamapulazi we-tarragon nama-mushroom othosiwe.
6 izinkomishi ze inkukhu abilisiwe, uthathe tincetu
1-2 tbsp. wezipuni amafutha omnqumo
2-3 tbsp. izinkezo zejusi elimnandi
1 indebe yethenda elisanhlamvu oluvundiwe, eliqoshiwe
0.5 izinkomishi ze-anyanisi obomvu, eziqoshiwe
1 inkomishi i-walnuts eqoshiwe
0.5 indebe eqoshiwe
1h. i-spoon lamaqabunga e-tarragon aqoshiwe (noma ama-tei we-0.25 we-tarragon omisiwe)
0.75 izindebe zemayonnaise
amaqabunga ama-salad amasha, ahlanza futhi asomisiwe
amaqanda amaqanda, tincetu noma oqoshiwe
izingcezu zepelepele obomvu
Gcoba inkukhu ngosawoti, pepper, amafutha omnqumo, ijusi kalamula, isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi, anyanisi nama-walnuts. Cover and refrigerate okungenani imizuzu engu-20, mhlawumbe ebusuku. Bese ukhiphela uketshezi oluthile, hlangana ne-parsley ne-tarragon. Susa isampula bese ungeza isiphuzo uma kunesidingo. Beka imayonnaise kakhulu ukuze zonke izingubo. Gcoba imifino izicucu, uwabeke epulangwe, bese ubeka isaladi phezulu. Ukumboza ngendwangu encane yamayonnaise bese uhlobisa ngamaqanda, iparsley kanye nemichilo yepelepele.
Amapancake ngezikhathi zonke
1 inkomishi kafulawa
0.75 indebe ebandayo ebomvu
0.75 izindebe zamanzi abandayo
Amaqanda amakhulu amathathu
U-0,25 tsp usawoti
3 tbsp. izinkezo zebhotela elicibilikile
amafutha okugcoba i-pan yokudoba
Hlanganisa konke kumisa ohlangene ku-blender noma i-whisk. Isifriji imizuzu engu-10. Lokhu kuzovumela izinhlayiya zefulawa ukuba zithole amanzi, futhi ama-pancake azoba yinkimbinkimbi. Sishisa i-pan engeyona induku yokudoba (ububanzi besansi yi-12-20 cm) ukuze amaconsi amanzi agxume kuwo; i-grease kancane nebhotela elicibilikile. Thela 2-3 tbsp. uthinte inhlama bese ugoqa ipani lokuthosa ngezindlela ezihlukene ukuze phansi kuhlanganiswe noqweqwe olulodwa. Bhaka cishe umzuzu owodwa kuze kube yilapho i-pancake iboniswe phansi; phenduka futhi masinyane fry ngakolunye uhlangothi. Beka i-grate bese uqhubeka nehhavini. Lapho ama-pancake epholile ngokuphelele, bawafake intaba. Esikhathini esiqandisini, zingagcinwa izinsuku ezimbili, futhi kufomu efriziwe - amasonto amaningana.
Ukukhiqizwa kwepion efanele
Zokupheka okumnandi, ukupheka ekhaya
Risotto nge amajikijolo
I-allergic isifo sezinso: i-nephritis
I-Homeopathy yokulahlekelwa isisindo
"Broccoli-mania" - ukulahlekelwa kwesisindo esisheshayo
Ukulungisa kahle iso: amathiphu amane avela abaculi bezimonyo
Indlela yokunakekela kahle utshani
Yeka ukuthi ungaphandle kanjani ukuba owesifazane obuthakathaka